नयाँ वर्ष २००९
संयुक्त श्रेष्ठ।, (-)
रूखको खोक्रा भित्र बस्ने
झुसे कीरामात्र खान बाध्य
गरीब मुलुकबासीहरू सामुन्ने,
आफूलाई ठूलो भन्ने देशहरूले
अकल्पनीय नमूनाहरू देखाए।
बर्षभरि कहिल्यै सामुन्ने नपर्ने
र मद्दत माग्दा उधारो मागे झै
फरक्क मुख फर्काउनेहरूले पनि
अन्यथा रित्तो मेरो इन्बक्सलाई
शुभकामनाको जंक-मेलले खाँदिदिए।
सबैले नयाँ वर्ष मनाए
सबैले नै शुभकामना दिए
तर २००९ भनिने यो नयाँ वर्षलाई
खै मैले आत्मसात गर्न सकेको?
पल्लाघरे बेखालाल दाइले
बुढो साइकलको ह्याण्डलमा
एक पोको खसीको मासु झुण्ड्याउदै
र गल्लीका कुकुरहरूलाई धपाउदै
'वैशाख १ गते त रमाईलो गर्नुपर्छ' भन्दै
घण्टी बजाउदै गएको
देख्न नपाएर पो हो कि?
मैले खासै ठम्याउन सकेको छैन।